အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? - fastforward
အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? eCommerce အဖြစ်ရပ်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ကြိုးစားရပါတယ်။ eCommerce မစတင်ခင်မှာ အရင်ဆုံးသိထားသင့်တဲ့ Research လုပ်ခြင်း‌တွေ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဈေးကွက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ရေရှည်တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။
၁) ကိုယ်ရောင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ပြင်ဆင်ရွေးချယ်ခြင်း။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘယ်လိုထုတ်ကုန်မျိုးကို အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ရောင်းရမလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကိုရောင်းရမလဲသိပြီဆိုရင်တော့ ဒီပစ္စည်းက တကယ်‌ရောရောင်းရမှာလားဆိုတာလည်း ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရပါမယ်။ ဈေးကွက်အလားအလာကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုတာဖြစ်လို့ ဒီအဆင့်တွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရောင်းမယ့် ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်ကနေရနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကို အမြဲရှာဖွေနေရပါမယ်။
၂) ဈေးကွက်အလားအလာကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေရှိတာကို သတိပြုပါ။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့အပြိုင် ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အရာတွေကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ သူများတွေထက်ပိုပြီးသာလွန်ကွဲထွက်နေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါ‌သေးတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကသူများထက် ပိုပြီးရှေ့ရောက်နိုင်မှာပါ။ ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းအတွက် Business Plan ကိုစတင်ရေးဆွဲဖို့လိုပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကြံဥာဏ်တွေနဲ့အတူ ဝယ်ယူသူ၊ ဖောက်သည်အသစ်တွေဆီဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ အကျိုးရှိရှိရောင်းချရမလဲ၊ ဘယ်အရာတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုပါ။
Domain name (.com) နဲ့ သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နာမည်၊ Brand နာမည်ကိုထည့်ခြင်းက ကုမ္ပဏီ‌ပေါ်ကိုလည်း တစ်နည်းအားဖြင့်သက်ရောက်စေမှာပါ။ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ website ပေါ်ကနေစပြီး Social Media ပေါ်အထိ ကုမ္ပဏီ အမှတ်တံဆိပ်ကိုပေါ်လွင်စေမယ့် Keywords ဒါမှမဟုတ် SEO (Search Engine Optimization) ကိုလည်းပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့တာမှလည်း မားကတ်တင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးအကျိုးရှိစေနိုင်မှာပါ။
၄) သင့်ရဲ့ eCommerce လုပ်ငန်းကို ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းတည်ဆောက်ပါ။
လက်ရှိမှာခေတ်စားနေတာတွေ၊ လူပိုစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေ၊ သေသပ်လှပတဲ့ ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံတွေ၊ သင့် eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုပေါ်လွင်စေမယ့် အရောင်ရွေးချယ်မှုတွေ၊ စတဲ့အချက်အလက်တွေကို ပြောင်းလဲဆန်းသစ်အောင်လုပ်နေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
၅) ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘယ်လို Channels တွေကနေ ရောင်းချမလဲဆိုတာရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ဝယ်သူ၊ဖောက်သည်တွေပေါ်မူတည်ပြီး အများစုရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ Social Media တွေကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ထိရောက်မှုရှိရှိနဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန်ရောင်းချရမှာဖြစ်ပါတယ်။
eCommerce လုပ်ငန်းနဲ့ရပ်တည်ဖို့စဉ်းစားပြီဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်ထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်က ငွေပေးချေမှုစနစ်ပါပဲ။သင့်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ eCommerce ကနေဘယ်လို ငွေလက်ခံမလဲဆိုတာကြိုတင်စဉ်းစားထားရပါမယ်။ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ လုပ်ငန်းအတွက်ရော ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေအတွက်ပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရမယ့် စနစ်ကိုရွေးချယ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အော်ဒါတက်ပြီး ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးမှာလဲ၊ Delivery ရရှိနိုင်မယ့်နေရာတွေနဲ့ မရနိုင်တဲ့နေရာတွေကို အစောပိုင်းတည်းက ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရပါမယ်။
၇) ဖောက်သည်အသစ်တွေရအောင် မားကတ်တင်း ကိုအရှိန်ယူပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။
ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို Google search ကနေရှာပြီး ဝင်လာတဲ့ Leads တွေ၊ Visitors တွေကို facebook page နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Traffic များများရအောင် မားကတ်တင်းနည်းဗျူဟာတွေကိုလည်း အသုံးပြုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်အဖြစ်ရပ်တည်လိုသတွေ၊ eCommerce လုပ်ငန်းကိုစတင်ချင်သူ‌တွေအတွက် ဘယ်ကနေစရမလဲ၊ ဘာတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာလဲ၊ ရေရှည်အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲစတဲ့ အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေအရ eCommerce က မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အရမ်းကိုအရှိန်ရနေပြီဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူ‌တွေအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Nextသင့် eCommerce ကို ပိုကြီးထွားစေမယ့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းချယ်နယ် (၅) ခုNext